#Luis Enrique waxaa soo jiitay indhaha kooxaha Chelsea iyo PSG, sidaasi waxaa yiri Guillem Balague | Get Latest News From Horn of Africa
Home Somali #Luis Enrique waxaa soo jiitay indhaha kooxaha Chelsea iyo PSG, sidaasi waxaa...
Guillem Balague ayaa shaaciyay shan shay oo ka soo baxaya Spain Isbuucaan, isagoo sharaxay in tababarihii hore ee Barcelona Luis Enrique uuu soo jiitay indhaha kooxaha Chelsea iyo PSG.
Atletico Madrid ayaa haatan 7 dhibcood ka dambeysa kooxda hogaanka heysa ee Barcelona, ​​ka dib markii ay guul ka gaareen Malaga, halka Barca ay barbareysay Getafe. Real Madrid ayaa 5-2 ku garaacday kooxda Real Sociedad, waxaana jira war wanaagsan oo laga helay Sevilla.
Haddaba Chelsea ayaa tartan weyn kala kulmi doonta Paris Saint-Germain, si ay tababare ugu magacawdo tababarihii hore ee Barcelona Luis Enrique.
Khabiirka kubbada cagta Spain Guillem Balague ayaa sheegtay in 47-jirkan uu soo jiitay wakiilada labada kooxood, ayna u arkaan inay xagaaga dambe labadooda midkood magacawdo.
Tababaraha haatan ee Chelsea Antonio Conte oo heshiis labo sanno ah u saxiixay kooxda ka dhisan Stamford Bridge, bishii July 2017, lakiin waxa uu si aad ah loola xiriirinayay inuu kooxda ka tagayo dhamaadka xilli ciyaareedkan.
“Waxa ay noqon doontaa xiiso u dhaxeeya labadooda, sababtoo ah waa koox awood leh ” ayuu Balague u sheegay Sky Sports.
“Waxa uu baranayay Ingiriiska muddo gaaban, waxaana uu ii sheegay xilli hore inuu ku faraxsan yahay Premier League, lakiin mustaqbalkiisa weli lama go’aamin karo.”
Enrique ayaa ka tagay Barcelona dhamaadkii xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ka dib markii uu ku guuleystay sagaal koob oo waa weyn intii uu ku sugnaa garoonka Nou Camp.
Waxa uu go’aansaday inuu sanad ka nasto ciyaaraha, laakiin wuxuu doonayaa inuu dib ugu laabto shaqada maamulka xagaagan, Balague ayaana sheegay in Enrique uu sidoo kale dalabyo ka heli karo meelo kale.
“Luis Enrique wuxuu doonayaa inuu noqdo tababare heer sarre ah, waxaana uu fursad u heystaa inuu PSG ama Chelsea ka qabto shaqo.
“Laakiin ma jirto wax go’aan ah oo haatan la gaaray, sababtoo ah kooxo badan ayaa xiiseynaya xilli ciyaareedka dambe isaga.”
Fiiro Gaar ah: Halkan kala socoo Dhamman ciyaarha dhacaya Caawa